Etu esi amata ma akwa akwa adighi nma - Ntụziaka | Ntụziaka
Susana godoy | | Akwa Ezi ntụziaka, Atụmatụ nri
Akwa a bụ nri nwere mmụọ nke na ọ bụrụ na ọ nọghị n’ọnọdụ dị mma, ọ nwere ike ibute nsị, n’ihi nke ahụ na ọkachasị n’oge dị ka oge ọkọchị ebe ọ ka dị ọkụ karị, anyị ga-agba mbọ hụ na ọ dabara adaba. maka oriri tupu i jiri ya na nri.
Ma…. ¿Etu esi amata ma akwa adighi nma? E wezụga ịmara nke akwa akwa dị ka anyị gwara gị ogologo oge gara aga na Recetin, ọ dị mkpa ịmata ma àkwá dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị.
1 Etu esi amata ma akwa di nma
2 Esi lelee ohuru nke akwa
3 Akwa akwa nkochi ime akwa
4 Debe ha n'otu okpomọkụ ahụ
Etu esi amata ma akwa di nma
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụ Kedu ka esi amata ma akwa akwa adighi nma, E nwere otu aghụghọ nke dị mfe: Naanị ị ga-ejupụta otu iko mmiri ma tinye akwa ahụ. Dị ka ọ na-eme, anyị ga-ahụ:
Ọ bụrụ na ọ dara ngwa ngwa: Ọ bụ na akwa ahụ dị ọhụrụ ma zuru oke iji rie ya.
Ọ bụrụ na ọ mikpuru ma ọ kwụ ọtọ:Anyị na-ahụ na akwa ahụ na-emikpu nwayọ ma nọrọ na ala n’ebe kwụ ọtọ. N'okwu a akwa ahụ adịghị ọhụrụ, ọ na-amalite njọ. Enwere ike iri ya ma oburu na anyi ekwenyeghi nke oma, o ka nma ka anyi ghara iri ya.
Akwa na-ese n’elu mmiri: N'okwu a, akwa ahụ adịghị mma, ya mere tụfuo ya.
Esi lelee ohuru nke akwa
Ọzọkwa ozugbo akwa ahụ meghere, anyị nwere ike ịmata ma ọ dị ọhụrụ ma ọ bụ na ọ dị ụbọchị ole na ole:
Ọ bụrụ na mgbe ị tinyere akwa ahụ na efere, ọ naghị agbasawanye nke ukwuu na nkochi ime akwa na-esi ike ma kọwaa nke ọma, akwa ahụ dị ọhụrụ.
Ọ bụrụ na mgbe anyị tinyere akwa n’elu efere ahụ, anyị ga-ahụ na ọcha na nkochi ime akwa ahụ na-agbasawanye n’ime efere ahụ, nkochi a na-edozikwa kpamkpam, akwa ahụ adịghị ọhụrụ.
N'ezie ịlele akwa ohuruE nwekwara usoro ndị ọzọ dị mfe. Ọbụghị naanị na anya, kamakwa ige ntị. Iji mee nke a, ị nwere ike iweta akwa ahụ na ntị gị. Ga-emegharị ya iji hụ ma ọ na-eme mkpọtụ dịka ịgba. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi gị ntakịrị ihe n’anya gị, ọ nwere mgbagha.
Mgbe ọ bụ akwa ọhụrụ, mkpọtụ dị otú ahụ ekwesịghị ịpụta. Ma mgbe akwa ahụ adịghị ọhụrụ dị ka anyị na-eche, ọ na-etolite ma nkochi ime akwa na ọcha na-akpọnwụ ntakịrị, na-akpụ ụdị akpa ikuku n'ime. N'ihi ya, a na-enwe obi ụtọ karịa mkpọtụ ahụ.
Na mgbakwunye, ị nwere ike esi ya ma ị ga-amarakwa ma ọ bụrụ na ọ bụ akwa ọhụrụ ma ọ bụ na ọ bụghị. I ga-eburu ụzọ tinye mmiri ya n’ọkụ, mgbe ọ ga-amịkwa, edebe àkwá ma sie ihe dị ka nkeji 10. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ajụ mmiri na ịgbawa nsen ahụ. Ozugbo emepere ya, ọ bụrụ na nkochi a na-etinye ebe etiti nke ọma, akwa ya dị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọ dị n’otu akụkụ ma ọ bụ karịa tinye na shea ahụ, mgbe ahụ ọhụụ ya na-ahapụ ọtụtụ ihe achọrọ.
Akwa akwa nkochi ime akwa
E nwere ndị dabere na nkochi ime akwa, ha kwenyere na akwa nwere ike ịdị njọ ma ọ bụ na ọ dịchaghị ọhụrụ. Anyị ga-ekwu na agba achapụtaghị maka ya. Ọ ga-adabere na mgbe niile n'ụdị nne ọkụkọ etinyela ya. Ọ bụ ezie na nke doro anya nwere ike inye anyị ntakịrị ntụnye na ihe adịghị mma. Ọ bụrụ na o nwere ụfọdụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, mgbe ahụ ị kwesịrị ịtụfu akwa ahụ maka na ọ na-egosi na nje ma ọ bụ fungi na-ebute ya. Oge ụfọdụ, mgbe anyị bisịrị akwa ma meghee ya, anyị nwere ike ịchọta ezigbo akara na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mana ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe gị, ebe ọ bụ na akwa ahụ ka dị mma.
Debe ha n'otu okpomọkụ ahụ
Ọ bụrụ na ị nwere akwa gị na ngwa nju oyi, mana maka ihe ọ bụla, ị hapụrụ ụfọdụ maka otu awa, wee chefuo iji ya. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na ha kwesịrị anọ n'otu okpomọkụ. A na-atụ aro mgbe niile ka ọ nọrọ n'ime friji ma ọ bụghị n'ọnụ ụzọ. Ebe ọ bụ na ebe a enwere ike inwekwu mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ.
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ dịtụ mgbagwoju anya, ọ bụghị. Anyị kwesịrị ịgbaso usoro ndị a iji rie ezigbo nri. Karịa ihe ọ bụla n’ihi na àkwá nwere ọtụtụ ihe ndị na-edozi ahụ́ anyị chọrọ. Mana ọ bụrụ na ha anọghị n'ọnọdụ kacha mma, ha nwere ike gbanwee imegide anyị. Iji aghụghọ ndị a, ị gakwaghị enwe obi abụọ ma a bịa n'iri akwa.
Anyị na-atụ anya na iji ndụmọdụ na usoro ndị a niile ị mụtara Kedu ka esi amata ma akwa akwa adighi nma.
Ma ugbu a na ịmara otu esi amata ndị dị mma, anyị na-akwado uzommeputa a dị ụtọ:
Akwa na tuna, tomato na karọt
Pathzọ zuru ezu na edemede: Recetin » Ntụziaka » Akwa Ezi ntụziaka » Etu esi amata ma akwa adighi nma
mgbe niile chọrọ ịmata nke a .. ekele ..
Zaghachi Dany Dans
Echere m na ọ bụrụ na akwa agbaa, ọ bụ n'ihi na nwa ọkụkọ meghere n'ime ya ma ike gwụ ya ma ọ na-ese n'elu mmiri ... XD
Jake 20318 (JakeTheDog) dijo
XDD. Echere m otu ihe ahụ.
Zaghachi Jake20318 (JakeTheDog)
Etinye m akwa n’ime mmiri, ọ daa ngwa ngwa, ma mgbe m mepere ya rere ure.
Tava n'onwe ya chọrọ ụfọdụ dicas assim! http://portelizabethlife.co.za/author/boydw38231/
Zaghachi na portelizabethlife.co.za
akpali nnọọ mmasị ya Ezi ntụziaka na ndụmọdụ ya. Daalụ.
Zaghachi Amada Condoy
Daalụ! Enwere m nnukwu uru ịme akwa, m mere mmiri a na mmiri wee gbadaa kpamkpam !! Daalụ.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ. Daalụ Sandra!
Daalụ maka ozi a nke ga-aba uru na nri m kwa ụbọchị.
Zaghachi MARTHA LUCIA MORALES
Obi dị anyị ụtọ na ọ baara gị uru.
Tomato na tuna lasagna